Inhlolovo: Obani abantu 'abangathandwa kakhulu' e-UK?
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » i-United Kingdom » Inhlolovo: Obani abantu 'abangathandwa kakhulu' e-UK?
AmaGypsies kanye nabahambi base-Ireland baqanjwe ngokuthi "abantu abangathandwa kakhulu" e-UK, kanti umphakathi wamaSulumane ubambe indawo yesibili ohlwini lwemiphakathi eminingi engathandwa.
Abacwaningi baseNyuvesi yaseBirmingham bahlanganyele noYouGov ukwenza inhlolovo ukuze bathole “lokho abantu baseBrithani abakucabangayo nge-Islam, amaSulumane nezinye izinhlanga nezinkolo ezincane.”
Inhloso yokuqala yocwaningo "ukusiza ekucaciseni izinga kanye nemvelo ye-Islamophobia e-UK."
Ngokwemiphumela yokugcina yocwaningo, amaGypsies kanye nabahambi base-Ireland baqanjwe ngokuthi "abantu abangathandwa kakhulu" UK, nomphakathi wamaSulumane obambe indawo yesibili ohlwini lwemiphakathi engathandwa kakhulu.
Inhlolovo iveze ukuthi u-25.9% kwabangu-1,667 abaphendulile "uzizwa kabi" ngamaSulumane, kanti u-9.9% uzizwa "emibi kakhulu."
AmaGypsies kanye nama-Irish Travellers kuphela abukwa kabi kakhulu umphakathi waseBrithani, njengoba u-44.6% wabantu ubabheka ngendlela engafanele, kusho umbiko.
Khonamanjalo, u-8.5% ububheka abantu abangamaJuda kabi, kanti u-6.4% usho okufanayo ngabantu abamnyama - kanti u-8.4% uthe ubuka abantu abamhlophe kabi.
Abacwaningi baphetha ngokuthi isimo sengqondo esinjalo esingesihle esivela emphakathini waseBrithani maqondana namaGypsies nama-Irish Travelers singachazwa nje kuphela ngokucwaswa, kodwa futhi ngenxa yokuthi “kunezijeziso ezimbalwa zomphakathi ezimelene nokuvuma obala ukuthi umuntu akakuthandi.
I-Islamophobia itholwe iza “ngezinhlobo ezimbili ezihlukene, zobuhlanga nezenkolo.”
"Nakuba sivumelana nezincazelo zakamuva zegama elithi i-Islamophobia iwuhlobo lokucwasa olubhekiswe kumaSulumane, siphinde sikhombisa ukuthi lubonakala njengokucwasa okuhlukile kwezenkolo," kusho umbiko.
Ngokusho kombhali walo mbiko, uDkt Stephen Jones, ukucwaswa kwezenhlalo kungaba nomthelela omkhulu ezimpendulweni.
“Okuthokozisayo uyabona ukuthi kukhona, ngokwesibonelo, ukucwaswa kwabantu abamnyama baseCaribbean base-Afrika UK, kodwa ocwaningweni abantu abaluvezi lobo butha ngendlela abenza ngayo kumaSulumane, ngendlela abenza ngayo kumaGypsies nama-Irish Travellers,” usho kanje.
UDkt. Jones uthe kunomuzwa wokuthi izinhlobo ezithile zobutha “zamukeleka esidlangalaleni,” evuma ukuthi izizathu zalokhu ziyinkimbinkimbi: "Kuncike ekumeleleni kwethu kwabezindaba, ebuholini bethu bezepolitiki, ezintweni ezahlukahlukene zomlando namasiko."
Birmingham I-Caribbean AmaSulumane
Izintengo zamathikithi ezikhangayo zase-US zenyuke kakhulu eminyakeni engu-5 edlule
I-SKAL International Call for Peace, Diplomacy in...
Isiguli sokuqala sidoselwe izimila eziqinile ezithuthukile
Ukuhamba ngendiza ukuya eMpumalanga Afrika kuzodlula ubhubhane lwangaphambi kobhubhane...
Isiguli sokuqala selashwe ngeqembu 2 SARTATE™...
Ingabe Isikhathi Sethu Emhlabeni Siphelile?
Amapaki Kazwelonke alungele izingane kakhulu e-USA
$100 million evela ku-UN ukulwa nendlala e-Afrika kanye...
Wazi kanjani ukuthi uye nini kwa-ER uma...
I-SKAL Bangkok inomongameli omusha: uJames Thurlby
Umbiko Wocwaningo Lwemakethe Yokushiswa Kwemisebe Yokudla Amathuba...
Ukudonsa komgogodla okuyingqayizivele okusetshenziselwa ukushintsha ukwakheka komgogodla
Uhulumeni waseZanzibar Usula Ukukhathazeka Kwezokuphepha Kwezivakashi...
Februwari 5, 2022 ku-21: 47